Ilanga ligcwele indawo efanelekile yokubhukuda nokufinyelela ogwini oluyimfihlo
Ocho Rios, St. Ann Parish, i-Jamaica
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Ricky
Gxila esitezi sesibili esisanda kulungiswa esinegumbi elilodwa elifaneleka e-Sandcastle Resort, ephakathi kwe-Ocho Rios, Jamaica. Izwa ingqikithi yaleli pharadesi elihehayo izinyathelo nje ukusuka emabhishi esihlabathi esimhlophe kanye nephuli. Ukude nemizuzu eDunns River Falls, Mystic Mountain, Konoko falls, Chukka's Cove, Dolphin Cove, Blue Hole, Starbucks, Margaritaville ngaphezulu.
Igumbi lokulala eliyinhloko linombhede olingana nendlovukazi kanye nedeski lalabo okungenzeka badinge ukweba ukuze baphendule ama-imeyili ambalwa. Kukhona i-tv yesikrini esiyisicaba efinyelela ku-Netflix, i-Hulu, i-Amazon Prime nekhebula lendawo. Igumbi ligcwele ukukhanya kwemvelo kodwa kulabo abaphuza ukukhuphuka kukhona namakhethini amnyama. Kukhona i-balcony enokubukwa kwentaba lapho ungahlala khona futhi ube nenkomishi yekhofi yasekuseni kakhulu ngaphambi kokuqala usuku lwakho, noma ingilazi yewayini ukuze uphumule ngemva kosuku olude olunezigigaba.
4.86 ·35 okushiwo abanye
Sitholakala enhliziyweni ye-Ocho Rios, enye yezindawo ezinkulu zezivakashi e-Jamaica WI. Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu; ukudla okuhle, ukudla kwasemgwaqweni kwendawo, ukuvakasha kokuya ezindaweni ezingaphandle ezikude nemizuzu engaphansi kwe-2 - 10 ukusuka efulethini. Uma ungathanda ukungena e-Kingston noma ukubona ingxenye yasemaphandleni ethe xaxa yase-Jamaica singakuhlelela nokuvakasha. Akukho okungaphezu kwamandla ezivakashi zethu.
Ngihlala ngitholakala nganoma imiphi imibuzo noma izinkathazo ongase ube nazo. Ungangabazi ukungithinta ngiwumbhalo nje noma ucingo ngaphandle.
URicky Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ocho Rios namaphethelo